मेरो उम्मेदवारी सहमहामन्त्री पदमा हुन्छः डा.डिला संग्रौला - लोकप्रिय समाचार
मेरो उम्मेदवारी सहमहामन्त्री पदमा हुन्छः डा.डिला संग्रौला
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद डा.डिला संग्रौला पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने तयारीमा हुनुहुन्छ । पार्टीमा मात्र नभइ संसदमा पनि उहाँको सक्रिय भूमिका रहँदै आएको छ । कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा धेरै नेताले विभिन्न पदमा उम्मेदावार पनि घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरू महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । तर, देशकै पुरानो पार्टीमा कुनै पनि महिला नेताले पदाधिकारी तहमा अहिलेसम्म उम्मेदवारी घोषणा गरेका छैनन् । महिलाहरूले उम्मेदवारी घोषणा गर्न किन ढिला गरेका हुन ? महिला नेताहरूको तयारी के छ ? यी विषयमा कांग्रेस नेता डा.संग्रौलासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीको सम्पादीत अंशः
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन पटक–पटक सरिरहेको छ । के अब तोकिएकै मिति (मंसिर २४–२६) मा महाधिवेशन हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मिति पटक–पटक सरेको हो । तर, मंसीरभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो बीचमा परेको नेपालीहरूको महान् चाडपर्व दसैँ, तिहार, छठलगायतका कारण महाधिवेशन मिति सरेर २४ देखि २६ गते तोकिएको हो । महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्नेमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले नै अन्तिम नामावाली प्रकाशन गरिसकेको छ । त्यही अनुसार हुन्छ र हुनुपर्छ । यसमा पार्टी नेतृत्व पनि प्रतिवद्ध भएर लागेको छ ।
कांग्रेसको भन्दा पछि महाधिवेशन घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले धमाधम अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछ । उनीहरूको निर्वाध अधिवेशनहरू भइरहेका छन् । कांग्रेस भने पटक–पटक सार्दा एमाले अध्यक्षले नै व्यङ्ग्य गर्न भ्याइसके । कांग्रेसलाई झन चुनौती थपिएन ?
चुनौती थपिएको छ । एमालेले धमाधम अधिवेशन गर्दैछ । कांग्रेसको पनि २४–२६ मंसीरभन्दा पछि महाधिवेशन धकेल्ने अधिकार कांग्रेसलाई छैन । तोकिएकै मितिभित्र कांग्रेसको पनि महाधिवेशन हुन्छ । १४ औं महाधिवेशनमा सभापति र महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने होड सुरु भइसक्यो । तर, एकजना पनि महिला नेताले माथिल्लो पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छैन ।
महिला नेताहरू पदाधिकारीमा पुग्ने सम्भावना कत्तिको छ ?
महिला नेताहरू पदाधिकारीमा आउनुपर्छ भन्ने लडाइँ नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा नै सुरु गरेको हुँ । यो एजेण्डालाई मैले देशभरी लगेको पनि थिएँ । जब नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य र माननीय भएँ, त्यसपछि पनि मेरो लडाइँ जारी छ । जसरी पनि महिलाहरू पदाधिकारीमा आउनुपर्छ भन्ने थियो र त्यो अडान अहिले पनि कायम छ । अब विधानमै त्यो प्रावधान समेटिनु पर्छ ।
उपसभापति र महामन्त्रीमा दुईजना निर्वाचित हुने प्रावधान छ । त्यसमध्ये दुबै पदमा एक÷एक महिला चुनिने व्यवस्था विधानमा गरिनुपर्छ । संविधानले पनि प्रतिनिधिसभाको सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्षमा एकजना महिला हुनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पार्टीको १४ औं महाधिवेशन विधानमा ८ वटा क्लस्टरमा मात्रै महिला छुट्याइएको छ । एउटा सहमहामन्त्री प्रदेशमा, अर्को केन्द्रमा । यसै कारणले गर्दा अब महिलाले माथिल्लो पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न खुट्टा कमाउनु हुँदैन । अहिलेसम्म सभापति र महामन्त्रीजस्ता पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न महिलाले इच्छा देखाएका छैनन् । उपसभापति, महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेर महिला अगाडि आउनुपर्छ । सीतादेवी यादव, चित्रलेखा यादवले कोषाध्यक्षमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो । उहाँहरू लगायत वरिष्ठ महिला नेताहरू माथिल्लो जिम्मेवारीका लागि तयार हुनुपर्छ ।
तपाईंले पार्टीको विभिन्न पदमा हुँदा खेल्नुभएको भूमिकाका कारण शसक्त नेताको पहिचान बनाइसक्नु भएको छ । आसन्न महाधिवेशनमा कुन पदमा उम्मेदवारी दिँदै हुनुहुन्छ ?
१४ औं महाधिवेशन आम कार्यकर्ताका लागि महाज्ञय हो । नेतृत्वमा जाने प्रक्रिया पनि हो । पार्टीभित्र आफूले गरेको कामलाई स्थापित गर्ने अवसर हो । त्यसकारण १४ औं महाधिवेशनमा म सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने गरी तयारी गरिरहेको छु ।
त्यसका लागि यहाँको तयारी कस्तो छ ?
नेपाल महिला संघको राष्ट्रिय अध्यक्ष भएँ । अहिले पनि सदन होस् या सडक होस् त्यहाँबाट समग्र महिलाको मुद्दा उठाएर अभियानको रूपमा लैजाने गरेको छु । महिला सशक्तिकरण, महिला अधिकार, युवाका समस्या, सामाजिक मुद्दा सबै जोडतोडका साथ उठाउँदै अगाडि बढाएको छु ।
नेपाली जनता, राष्ट्रियताको रक्षा र लोकतन्त्रको लागि सधैं अग्रपंक्तिमा उभिएको छु । यो पटक सहमहामन्त्री पद मेरो लागि ठिक छ, उठ्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छु । देशभरबाट मलाई पार्टीका साथीहरूबाट हौसला, साथ र सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । उहाँहरूको साथ र सहयोग सधैं पाउने अपेक्षा गरेको छु । सोहीअनुसार मैले उम्मेदवारी दिने तयारीलाई तीव्रताका साथ अघि बढेको छु ।
तपाईं सशक्त महिला नेता हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद् सदस्यमा किन स्थान पाउनुभएन ?
म सधैं पार्टीकै कामका तल्लिन छु । विहानदेखि बेलुकीसम्म पार्टीकै गतिविधिमा संलग्न हुन्छु । कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा पनि मैले सशक्त रूपमा सरकारको खबरदारी गरेकै हुँ । पार्टीले बनाएको छायाँ सरकारको सदस्य भएर पनि मैले जिम्मेवारी निर्वाह गरें । म मन्त्री भएको देख्न चाहने देशभरका कार्यकर्ताको चाहना थियो । तर, पार्टी नेतृत्वको मूल्यांकनमा म परिनँ । यसप्रति मेरो गुनासो पनि छैन । तर, पार्टीका साथीहरूले मेरो भूमिकाको मूल्यांकन गर्नु भएकै होला । त्यहीअनुसार मलाई माया गर्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
Prevभोटेकोशीमा सरसफाई कार्यक्रम
Nextतामाङ पत्रकार सँघ सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्षमा प्रितम